बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकको साढे ४ खर्ब सापटी — Sanchar Kendra
काठमाडौँ । बैंकहरूसँग अहिले लगानीयोग्य रकम अभाव छ। बैंकहरूले आफ्नो रकम भरथेग गर्न राष्ट्र बैंकबाट पाउने अल्पकालीन सुविधाहरू प्रयोग गरिरहेका छन्।
यस्ता विभिन्न सुविधाबापत उनीहरूले साढे चार खर्ब रूपैयाँ लिएका छन्। यो सापट रकम उनीहरूले ढुक्कसँग चलाउन पाइरहेका छन्। यसमध्ये स्थायी तरलता सुविधाअन्तर्गत मात्र बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट पाउने २ खर्ब रूपैयाँ अहिले चलाइरहेकै छन्। यो वर्ष हालसम्म स्थायी तरलता सुविधाअन्तर्गत मात्र बैंकहरूले चलाएको रकम ६७ खर्ब ६५ अर्ब पुगिसकेको छ।
यति मात्र होइन, स्थानीय तहहरूमा जाने सञ्चित कोषको रकम वाणिज्य बैंकहरूमा जम्मा गर्ने गरिएको छ। उक्त रकममध्ये ८० प्रतिशत रकम निक्षेपका रूपमा गणना गर्न पाउने सुविधा बैंकहरूलाई छ। यसअनुसार बैंकहरूले स्थानीय तहको एक खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँलाई निक्षेपका रूपमा देखाएर कर्जा लगानी गर्न पाइरहेका छन्। बैंकहरूले यो सुविधा आगामी असारसम्म मात्र पाउने छन्।
‘अहिलेको अवस्थामा तरलता अभावको समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्,’ अर्थविद् डा. विश्वास गौतमले सेतोपाटीसँग भने, ‘यो समस्या सल्टाउन या त बैंकहरूको निक्षेप स्रोत बढ्नुपर्छ या कर्जा लगानी घटाउँदै जानुपर्ने देखिन्छ।’
के हो तरलता अभाव ?
‘बैंकहरूले आफ्नो कर्जा-निक्षेप अनुपातलाई सीमाभित्र ल्याउने प्रस्ताव राष्ट्र बैंकमा पठाएका छन्,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘ठोस आधार भने दिएका छैनन्। तर यसबारे राष्ट्र बैंकको नीति संशोधन हुने छैन।’